Al-Shabaab oo soo bandhigay Askar ay ku sheegeen inay ka soo goosteen Jubbaland | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo soo bandhigay Askar ay ku sheegeen inay ka soo goosteen...
Al-Shabaab oo soo bandhigay Askar ay ku sheegeen inay ka soo goosteen Jubbaland
Jilib (Halqaran.com) – Al-Shabaab ayaa sheegtay inay isa soo dhiibeen Askar ka tirsaneyd Maamulka Jubbaland, kadib xiriir ay la soo sameeyeen xubno Shabaab ka tirsan, sida ay baahiyeen warbaahinta ku hadla Afka Shabaab.
Maxkamadda Magaalada Jilib ayaa la sheegay raggaan in lagu soo bandhigay shalay galab iyaga oo wata hubkooda, kadib markii ay isaga soo tageen Maamulka Jubbaland ee fadhigiisa uu yahay Magaalada Kismaayo.
Xasan Cabdi Ibraahim oo ka mid ahaa guutada 43aad ee ciidamada dowladda qeybta maamulka ‘Jubbaland’ iyo Deeq Xasan Cabdi oo ka mid ahaa saraakiisha Nabad sugidda Kismaayo ayeey Shabaab sheegeen inay u soo goosteen dhankooda.
Sida Shabaab ay sheegeen raggaan ayaa watay laba Qori oo Ak47 ah, waana loo lacageeyay, iyadoo lagu soo bandhigay xarunta Maxkamadda Degmada Jilib.
Askartaan ayaa muddo sanad ah ka tirsanaa Ciidamada Militariga iyo Ciidanka Nabad Suggida Jubbaland, ugu dambeyna go’aansaday inay Shabaab ku biiraan.
Ururka Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe soo bandhigaayay Askar ay sheegeen inay ka soo goosteen dhanka Maamulka Jubbaland.
Askar ka soo goostay Jubbaland